SomaliTalk.com » 2012 » January » 12
Home » Archive Maalinta January 12th, 2012
Magaalada Wajeer Weerar ka dhacay oo lagu diley Saraakiil ka tirsan Ciidamada Kenya
Wararka naga soo gaaraya Magaalada Wajeer ee Waqooyiga Bari ee Dalka Kiinya ayaa sheegaya in barqanimadii maanta Kooxo Hubaysan ay weerar ku qaadeen Ciidamo Kiinyaan ah oo Magaaladaas ku sugnaa. Weerarkan ayaa sida la sheegay waxaa ku dhintay Illaa Seddax Sarkaal oo ka tirsan Ciidamada Kiinya halka tiro intaa ka badanina ay ku dhaawacmeen. Afhayeenka Xukuumadda Kiinya Mr Ereg oo goor dhaweyt Saxaafadda...
Ra’iisul Wasaaraha DFKMG oo la kulmay Madaxwynaha Jabuuti iyo Ra’iisul Wasaare Dileyte
Warsaxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra’iisul wasaaraha DFKMG: Ra’iisul Wasaarahe Abdiweli Mohamed Ali oo booqasho rasmi ah ku jooga dalka Djibouti ayaa maanta la kulmay Madaxweynaha Djibouti Ismail Omar Gelle. Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa Madaxweynaha Djibouti uga mahadceliyey sida uu isaga, dowladiisa iyo shacabka Djbiouti ay marwalba ugu heelan yihiin una garab istaaganyihiin...
Ciyaaraha aan ugu jecleyn yaraantii waxaa ugu muhiimsanaa laynta mulacyada, jiirka shinbiraha iwm. Sida badanna koox da’ ahaan isku dhow ayaan ahaanjirnay oo leeb iyo qaanso ley ah, inta badanna waxaa hoggaamiye noqon jiray ninka ugu laayaansan ama ugu firfircoonida badan. Waxaa dhici jirtay in xooluhu naga lumaan sidaan mulac ama shinbir u eryaneyno, sida badanna howlahaas waan joojin jirnay markii...